कसरी मुड जोडी मार्फत दुई कम्प्युटर बीच एक स्थानीय क्षेत्र सञ्जाल सिर्जना गर्न। जग
त्यहाँ प्रयोगकर्ता एक्लै प्रश्न बुझ्न प्रयास भन्ने कुरामा कुनै शंका छ, कसरी दुई कम्प्युटर बीच स्थानीय सञ्जाल बनाउन, लामो सरल प्रयोगकर्ता outgrown छ, तर पहिलो पटक नेटवर्क प्रविधिहरू संग सामना गर्नुपरेको थियो। यो एकदम सामान्य छ, र कहिलेकाहीं उत्तर पनि अनुभव कम्प्युटर वैज्ञानिकहरूले खोजिरहेका छन्। तसर्थ, साथ, जवाफ, अधिक विस्तृत विषय अध्ययन एक स्थानीय नेटवर्क जडान गर्न दुई कम्प्युटर बीच।
लैन मात्र होइन कार्यालय भवन को सबै कम्प्युटर प्रत्येक अन्य जडान भएका छन् जहाँ ठूलो कम्पनीहरु, को पूर्वाधार मा मांग मा, कि तपाईं चाँडै काम को परिणाम साझेदारी गर्न अनुमति दिन्छ। कसरी दुई कम्प्युटर बीच एक स्थानीय नेटवर्क सिर्जना गर्न को प्रश्न, तपाईं साधारण प्रयोगकर्ताहरूलाई जवाफ आवश्यक जब झन्, त्यहाँ एक अवस्था हो।
इन्टरनेटमा पहुँच को प्रदायकहरू बीचमा, अब सदस्यताका लागि जारी प्रतियोगिता हो भन्ने तथ्यलाई बावजुद केही समुदायमा सेवा को लागत एकदम उच्च छ। यस मामला मा, सही समाधान केवल एक कम्प्युटर वैश्विक नेटवर्क अन्य एकताबद्ध स्थानीय जडान लागि इन्टरनेट पहुँच प्रदान गर्नेछ जडान छ। लाभ स्पष्ट छ: प्रत्येक पार्टीले महसुल योजना को लागत को आफ्नो भाग दिन्छिन्।
कसरी दुई कम्प्युटर बीच एक स्थानीय नेटवर्क जडान यस्तो सिर्जना गर्न र प्रदर्शन गर्न समझ द्वारा, खेलाडीहरूलाई तिनीहरूलाई साथ सँगै समय बिताउने मौका छ। फिलिम प्रेमीहरूको एक भिडियो स्टोर, सबैलाई सुलभ व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
कसरी एक स्थानीय नेटवर्क सिर्जना गर्न? प्रतिक्रिया तथाकथित स्थानीय क्षेत्र सञ्जाल (वैश्विक गर्न विरोध रूपमा), दुई कम्प्युटर बीच प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, कुनै पनि कठिनाइ यो सामान्यतया, उत्पादकहरु को कम्प्युटर हार्डवेयर र सफ्टवेयर विकासकर्ताले विवेकपुर्वक यस्तो सम्भावना हेरविचार किनभने उत्पन्न गर्दैन।
कसरी दुई कम्प्युटर बीच एक स्थानीय नेटवर्क सिर्जना गर्न को प्रश्नको जवाफ गर्न सजिलो तरिका निर्मित मार्फत दुई सिस्टम एकाइहरु जडान गर्न छ नेटवर्क कार्ड। व्यक्तिगत कम्प्युटर आवास पछाडि प्यानल नेटवर्क कार्ड कनेक्टर को अधिकता बीच एक पोर्ट छ। उहाँले सामान्य फोन, मात्र अलिकति आकार बढेको सम्झना दिलाउँछ। आधुनिक कम्प्युटर को नेटवर्क इन्टरफेस 1 गिगाबिट 100 megabits को गति लागि डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। मुड जोडी, विशेष संडसी को किनाराको कनेक्टरों ( "बाबाले" connectors) माउन्ट जो मा - तिनीहरूलाई बीच जडान लागि, विशेष केबल प्रयोग गर्नुहोस्। सामान्यतया, बिक्री पसलहरूमा मुड जोडी crimp सेवाहरू (समेकन) प्रस्ताव।
सबै को त पहिलो, यो सही कम्प्युटर बीच दूरी मापन गर्न आवश्यक छ। यसलाई 120 मिटर छ, र 100 Mbit जडान गर्न योजना छ भने, तपाईंले पसलमा गएर तुरुन्तै तार खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यो आफ्नो स्थापना ठाउँ विचार गर्नु पर्छ बढी एक बिट जटिल छ जो एक हब (हब) वा स्विच (स्विच), - ठूलो लम्बाइ हरेक 100-मीटर खण्ड द्वारा विशेष निम्न उपकरणहरू जडान गर्न आवश्यक छ।
नेटवर्क केबल कनेक्टरों जडान गरेपछि, तपाईँले नेटवर्क कार्ड पीसी BIOS को सेटिङ स्थिति जाँच गर्न आवश्यक - यो सक्षम हुनुपर्छ (सक्षम), र सञ्चालन प्रणाली उपयुक्त चालक स्थापित।
सबै छ। विन्डोज स्वतः एक अद्वितीय नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड नम्बर प्रदान। , तपाईं उपलब्ध फोल्डरहरू हेर्न कहाँ - "मेरो नेटवर्क स्थान मेरो कम्प्युटर" को बाटो साथ अगाडि बढ्न रहनेछ। इच्छित निर्देशिका वा ड्राइव पहुँच खुला "पहुँच" चयन इच्छित वस्तु "गुण" मा क्लिक गरेर र त्यसपछि द्वारा। विन्डो मा तपाईं चयन गरेर परिवर्तन पुष्टि गर्न चाहनुहुन्छ "साझेदारी गर्नुहोस्।"
को कम्प्युटर प्रत्येक अन्य हेर्न भने, तपाईँले गर्नुपर्ने सेटअप नेटवर्क कार्ड सीधा चाहेको गति र द्वैध (जस्तै, 100 एमबी पूर्ण डुप्लेक्स) निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
निस्सन्देह, तपाईंले एक स्थानीय नेटवर्क सिर्जना गर्दा, र कहिले काँही त्यहाँ अन्य मुद्दा हो, तर तिनीहरूले एक लेखमा असम्भव छ कवर।
पृष्ठ VKontakte कसरी मेटाउन
को "स्कूलका साथीहरू" जस्तै उमेर हटाउन? "स्कूलका साथीहरू" मा उमेर लुकाउन कसरी
के तपाईंलाई थाहा छ कि कसरी तुरुन्त सुक्नु हुन्छ?
Zheremi Kapon। सबै मा प्रतिभाशाली
मलोर्का द्वीप - पर्यटकहरुका लागि सुन्दर बगैंचा